प्रकाशित मिति: 2018/04/03
प्रतिष्ठा अमात्य (विष्ट) एक सफल महिला उद्यमी हुनुहुन्छ । विगत लामो समयदेखि पर्यटन व्यवसायमा क्रियाशिल उहाँले संसारमै अद्वितीय क्षमता भएकाहरुलाई प्रदान गर्ने गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्ड कायम गरी सफल नेपाली नारीको रुपमा आफुलाई उभ्याउनुभएको छ । बौद्धिक विद्याअन्तर्गत अद्भुत स्मरण क्षमता प्रर्दशन गरेर उहाँले सन् २००५ मार्च २५ मा बेलायती नागरिक जस्टिन हार्डलेले कायम गरेको विश्व रेकर्ड तोड्दै गिनिज वल्ड रेकर्डमा आफ्नो नाम दर्ज गर्न सफल हुनुभएको थियो ।
विश्व रेकर्ड कायम गरेपश्चात विकसित मुलुकहरुमा बसोबासका थुप्रै अवसरहरु पाएपनि उहाँले नेपालमै केही गर्ने मनसायका साथ व्यवसाय गर्दै आउनुभएको छ । कुनै पनि मुलुकमा गएर दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बाच्नुभन्दा नेपालमै बसेर केही गर्ने तीब्र आकांक्ष उहाँसँग छ । सोही कारण उहाँले अहिले आफ्ना पति संघर्ष विष्टको साथमा पर्यटन व्यवसाय क्षेत्रलाई अघि बढाइरहनुभएको छ । अमात्य दम्पतीले ठमेल, दरबारमार्ग, लाजिम्पाटलगायत विभिन्न स्थानमा चार वटा होटल सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ । ती सबैको व्यवस्थापकीय पाटो श्रीमान विष्टले हेर्दै आउनुभएको छ भने आर्थिक पाटो अमात्यले नै सम्हाल्दै आउनु भएको छ र उहाँहरुको व्यवसायबाट दुई सय हाराहारीले प्रत्यक्ष रोजगारीसमेत पाइरहेका छन् ।
यसै शिलशिलामा बुद्ध नेपालमा जन्मेको सन्देश संसारभर प्रवाह गर्ने उद्धेश्यका साथ उहाँकै संयोजनमा केही समयअघि काठमाडौंका टुडिखेलमा लाखौ मानिस भेला गराई ‘बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिएको छ । गिनिज बुकमा रेकर्ड राख्न चलाइएको सो अभियान, नेपालको समग्र पर्यटन क्षेत्रको अवस्थालगायत समसामयिक विषयमा गन्तव्य नेपालले उनै विष्टसँग गरेको कुराकानी :
‘बुद्ध वोज बर्न इन नेपाल’ अभियान चलाउनुको भयो । त्यसको खास उद्धेश्य चाही के हो ?
हुन त, बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन भनेर युनेस्कोले प्रमाणित गरिसकेको छ । तर त्यो पर्याप्त छैन । हल्ला गर्नेहरुले हल्ला गर्न छाडेका छैनन् । भारतले बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भनेर हल्ला मात्रै फैलाई रहेको छैन कि आफ्ना पाठ्यक्रममै यो विषय समावेश गरी आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई पढाइरहेको छ । त्यस्तै केही समयअघि मात्रै दलाई लामाले पनि बुद्ध भारतमा जन्मेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । यी यस्तै कारण युनेस्कोले प्रमाणित गरेपनि प्रत्येक मानिसको कान कानमा बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन भन्ने सहि सन्देश पुर्‍याउन आवश्यक छ । र, त्यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो । सत्य कुरा संसारभर फैलाउनुपर्छ । त्यसैका लागि हामीले विश्व रेकर्डको अभियानसहित बुद्ध वोज बर्न इन नेपाल अभियान सञ्चालन गरेका हौं ।
तपाईहरुको अभियानले उद्देश्यअनुरुप सफलता हासिल गर्‍यो त ?
पहिलो कुरो त तपाईलाई स्पष्ट पारीहालौं कि भारतले १६औं शताब्दीमा आफ्ना कबिले लेखेको कविता वाचन गरेर विश्व रेकर्ड कायम गर्‍यो । हामीले त्यो रेकर्ड तोड्नका लागि के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्दा बुद्धको वाणी पढ्नु नै उपयुक्त र बढी महत्वपूर्ण ठानेर त्यो गरेका हौं । र, यो पनि स्पष्ट पार्न जरुरी छ कि हामीले बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन भन्ने प्रमाणित गर्न यो काम गरेका होइनौ । त्यो त प्रमाणित नै छ । मात्र बुद्धको सन्देश विश्वभर फैलाउन फैलाउन यो कार्यक्रम गरेका हौं । बुद्धको धर्मपथलाई पछ्याएका हांै ।
यस्तै अभियान अन्त पनि चलाउने कुनै योजना छ ?
तत्काललाई छैन । विश्व रेकर्ड पनि कायम हुन्छ, हुदैन थाहा छैन । हुन त लाखौ मानिसहरु टुडिखेल पुगेका थिए । तर प्राविधिक रुपमा हामी चुकेका छौं । त्यसका बावजुद्ध पनि ४८ हजार ९ सय ४३ जना पुगेको छ । गणनाकै आधारमा पनि भारतको रेकर्ड हामीले तोडिसकेका छौं । तर त्यो कायम होला नहोला हेरौं ।
तपाईको विचारमा बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने सन्देश फैलाउन राज्यले चाही के गर्नुपर्ला ?
जुन कार्य हामीले गर्‍यौं वास्तवमा त्यो राज्यको दायित्व थियो । तर पनि हामी केही व्यक्ति मिलेर यो काम गर्‍यौं । त्यसमा पनि राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने थियो । तर कुनै सहयोग पाएनौं । सरकारले यस्तै सन्देशमुलक कार्यहरु गरेर विश्वभरका मानिसको कान कानमा यो सन्देश फैलाउन जरुरी छ । हल्ला फैलाउनेहरुलाई निस्तेज पार्न जरुरी छ ।
यस्ता कार्यले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउछ ?
ठूलो सहयोग पुर्‍याउँछ । विश्वभरका १ प्रतिशत बुद्धिष्टहरु मात्र नेपाल भ्रमणमा आए नेपालको पर्यटन क्षेत्र थामीनसक्नु हुन्छ । जसरी हर्ज गर्न बार्षिक लाखौ मुश्लिमहरु मक्का पुग्छन् । त्यसैगरी बुद्ध नेपालमा जन्मेको सन्देश विश्वभरका मानिस माझ पुर्‍याउन सके नेपालको पर्यटक आगमन पनि बढ्छ । विश्वमा कुल जनसंख्याको ९/१० प्रतिशत बुद्धिष्टहरु छन् । त्यस्तै छिमेकी मुलुक चीनमै कुल जनसंख्याको १८.२ प्रतिशत जनता बुद्धिष्ट छन् । त्यसको केही प्रतिशत मात्र नेपाल आउने वातावरण हामीले सृजना गर्ने हो भने नेपालको पर्यटन बुम हुन्छ ।
त्यसका लागि त पूर्वाधार पनि चाहिएला नि ?
त्यो त अत्यावश्यक सर्त नै भइहाल्यो । पर्यटकीय पूर्वाधार बिना त त्यो सम्भव नै छैन । हुन त भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाइएको छ । त्यसलाई तीब्रता दिन आवश्यक छ । यसका अलवा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको स्तरोन्नतिदेखि अन्य अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न जरुरी छ । आजका दिनसम्म राज्यले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि खासै काम गर्न सकेको छैन । त्यसकारण पूर्वाधार विकासमा त राज्यले नै तदारुकता देखाउन जरुरी छ ।
अन्त्यमा नवगठित सरकारसँग व्यवसायीको नाताले तपाईको अपेक्षा के छ ?
निर्वाचन पश्चात ताजा जनादेशअनुसार बाम गठबन्धनले झन्डै झन्डै दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकार निर्माण गरेको छ । यसबाट ६/६ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहने संस्कारबाट हामीले छुटकारा पाउने संकेत देखिएको छ । त्यसकारण ५ वर्षसम्म यो सरकारले काम गर्ने हो भने धेरै कुराहरु सम्भव छ । ५ वर्षको अवधीमा कायापलट भएका मुलुकहरु पनि हामीले देखेका छौं । त्यसले गर्दा मैले अघि पनि भने सबैभन्दा पहिला त पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा यो सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । हुन त अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि केही गरौं भन्ने मनसाय बोकेको नेता हुनुहुन्छ भने पर्यटनमन्त्रीको रुपमा पनि यूवा नेता जसको समाजमा निकै सकारात्मक छाप मात्रै छैन केही गर्न सक्ने नेताको रुपमा हेरिएको छ । त्यसकारण यो अवधीमा मुलुकको पर्यटन क्षेत्रले पनि निकै ठूलो फड्को मार्छ । हामी विगतकै जस्तो पूर्वाधार भएन र १० लाख पर्यटक पनि पुगेन भन्ने गुनासो गरेर र सुनेर बस्नु पदैन होला भन्ने म मात्र होइन पर्यटन व्यवसायीको अपेक्षा छ ।